I-Leadfeeder: Chonga kunye nokufumana amanqaku eenkampani ze-B2B eziNdwendwela indawo yakho | Martech Zone
NgoLwesibini, Septemba 22, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 Douglas Karr
Umkhokeli yinkqubo yewebhu eyonyusa ubukrelekrele bakho bokuthengisa ngokudibanisa idatha yakho yokuthengisa kunye nentengiso, eyenza ukuba umbutho wakho ufumane amashishini amatsha kwaye ujonge abathengi abakhoyo abaza kwiwebhusayithi yakho. Ukuchongwa kudityaniswa nedathabheyisi etyebileyo yabasebenzi apho unokufumana khona ii-imeyile kunye neeprofayili zentlalo zabantu abenza izigqibo kumbutho. Esi sisixhobo esihle kumashishini e-B2B kuba inokuchonga iindwendwe ezingaziwayo ezinenjongo yokuthenga.
Chonga amathemba eABM aNdwendwela indawo yakho
Njengenxalenye ye Intengiso esekwe kwiAkhawunti (ABM) isicwangciso, sisixhobo esimnandi. Njengoko ujolise, ubhengeze, okanye uphakamisa iimveliso kunye neenkonzo zakho kwiinkampani ezithile, ungalumkisa abasebenzi bakho xa ezo nkampani zityelele iwebhusayithi yakho kwaye ubone ukuba basebenzisana phi kwindawo yakho. I-Leadfeeder ikwenza ukuba uvumelanise uluhlu lweeakhawunti zakho kwi-Leadfeeder, unike impendulo, kwaye waziswe kwakamsinya xa betyelele iwebhusayithi yakho. Iqela lakho lokuthengisa linokuthi emva koko lilandele ngokuthe ngqo ekujolise kuko.
Sebenzisa iLadFeeder kwiNkqubo yakho yokuThengisa
Ukusebenzisa isixhobo esinjengalesi kunokunyusa amaqela akho okuthengisa kugxile kwinjongo ephezulu yeemveliso kunye neenkonzo zenkampani yakho. Nge-Leadfeeder kunye ne-CRM yakho okanye iqonga le-ABM, inkqubo eqhelekileyo inokujongeka ngoluhlobo:
Undwendwe olungaziwayo lufika kwiwebhusayithi yakho.
Ngokusekwe kwezinye izihluzi zeshishini ozibekile okanye iithagethi zeABM ozivumelanisileyo, ummeli wakho wentengiso wazisiwe ngomsebenzi.
Ukuba awuyenzi i-ABM, iqela lakho lokuthengisa linokujonga kwinkampani kwaye lichonge ukuba lilungelo okanye alisekelwanga kwinkangeleko yenkampani.
Ukuba kukho ithemba, ummeli wakho wentengiso unokujonga abafowunelwa kwinkampani ekuyo Umkhokeli Ukuchonga ukuba ngubani owenza izigqibo ngaphakathi kwenkampani onokunxibelelana naye.
Ungathumela ngokuzenzekelayo ii-imeyile kwiqonga lakho lokuthengisa elidityanisiweyo okanye umthengisi wentengiso yakho angathumela inowuthi okanye enze umnxeba wokunceda okanye ukuseta umnxeba wentengiso.
Iimpawu zeLadfeeder zibandakanya
Qhagamshelana nokuqonda -I-Leadfeeder ibonelela ngokufikelela kwiziko ledatha elomeleleyo labafowunelwa bakho. Ngoku ungaqala incoko ngaphandle komzamo omncinci.
Ukufumana amanqaku okuzenzekelayo -Ukhokelo lwakho olushushu lubekwa ngokuzenzekelayo phezulu kuluhlu lwakho olukhokelayo ukuze wazi apho unokujonga khona ngokulandelayo.
Ijenali ekhokelayo yangoku -Umkhondo wethu uhlala etyhala idatha yonke imizuzu emi-5! Ukunika umsinga rhoqo wamathuba wokulandela kwangoko xa bengenayo.
Izilumkiso ze-imeyile zobuqu -Ukuba iinkampani ezithile zityelele iwebhusayithi yakho uya kwaziswa nge-imeyile oko kuthetha ukuba unokulandela ixesha elifanelekileyo.
Ukuzenzekelayo kwiCRM yakho -Ukuba uqhagamshele enye yeendawo ezininzi zokudityaniswa kweCRM, okanye iSlack, kwi-Leadfeeder yakho, hlala umva njengoko sithumela ngokuzenzekelayo utyelelo olutsha kumbhobho wakho wokuthengisa.
Abasebenzisi abaSimahla -Yongeza abasebenzisi abaninzi ngendlela othanda ngayo kwaye usebenzise izixhobo zokulawula eziphambili ze-Leadfeeder ukuze inkampani yakho ingaphoswa yenye ekhokelayo kwi-Intanethi.
UkuKhangela okuNamandla -Khangela nayiphi na inkampani kwi-Leadfeeder kwaye ujonge imbali yabo yokukhangela ukuze ufumane umfanekiso opheleleyo wezinto abanomdla kuzo.
Ukucoca izinto ezahlukeneyo -Yila kwaye ugcine zonke iintlobo zokutya okunamandla njengeenkampani ezivela kwilizwe elithile, umkhankaso weAdWords okanye iphepha elithile lewebhu.
I-Leadfeeder idibanisa ne-Pipedrive, i-Mailchimp, i-Salesforce, Hubspot, Zoho, Zapier, Microsoft Dynamics 365, Slack, WebCRM, G Suite, Isitudiyo sedatha kaGoogle, kunye noHlaziyo lukaGoogle.
Qala uvavanyo lweentsuku ezili-14 zeLadfeeder
Ukubhengezwa: Sisebenzisa ikhonkco lokudibana Umkhokeli kweli nqaku.
tags: Intengiso esekwe kwiakhawuntii-google analyticsIsitudiyo sedatha kaGooglegsuithubspotekhokelelamailchimpImicrosoft dynamics 365UmbhobhoukuthengisaMusaI-WebCRMzapperZoho
I-Sharpspring: UkuThengiswa okuPheleleyo kunye nokuThengiswayo kunye neNtengiso yeQonga lokuZenzekelayo